သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရေခန်း - Twesix
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရေခန်း.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Twesix.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Twesix.
၎င်းကိုပွတ်လိုက်သည့်အခါ Twesix သည်တင်သွင်းသောအလိုအလျောက် polishing စက်များကိုလက်ခံသည်။ ဤစက်များသည်ဤထုတ်ကုန်၏စီမံကိန်း, kibble နှင့် polishing အောင်မြင်နိုင်ကြသည်။.
Pasta (သို့) spaghetti dphg150s-g Tsix factry ကိုခြောက်သွေ့ရန်အကောင်းဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်း spaghetti ခြောက်သွေ့စက်
ခေါက်ဆွဲသို့မဟုတ် spaghetti သည်အီတလီအစားအစာများကိုအဓိကအားဖြင့်အစာကျွေးသောအစားအစာဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Miled ဂျုံ, ရေ, သို့မဟုတ်ဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုများဖြင့်ကြွယ်ဝသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဂျုံကိုပြုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးအဆင့်များ၌အပူချိန်သည်ခေါက်ဆွဲကိုပုံသွင်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Tsis Noodle ခြောက်သွေ့သောစက်အခြောက်ခံစက်ဖြင့် SGGGETTI ကိုခြောက်သွေ့စေရန်နှင့်အလယ်အပူချိန်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံသဏ္ဌာန်မဟုတ်ဘဲအာဟာရကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
Tsix စက်မှုလုပ်ငန်းများခြောက်သွေ့စက် Ginger Chili Dryer စက် -dphg050s-g
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်သွေ့စက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည်။ ထိုတွင်ခြောက်သွေ့သောဂျင်း, ကြက်သွန်ဖြူ, အမွှေးအကြိုင်စက်သည်ငရုတ်သီး, ကြက်သွန်, ကြက်သွန်ဖြူ, ဂျင်း,
စက်မှု Seekeed Dehydator နှင့် dehumidifier dphg150s-x
အပူချိန်အပူချိန်အခြောက်ခံစက်များအားအနည်းဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများ၌ခြောက်သွေ့စေရန်အောင်မြင်စွာလျှောက်လွှာတင်ခြင်းဖြင့်ပင်လယ်စာအပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်များအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ပါ။ Kelp ခြောက်သွေ့ခန်းတွင်ထုတ်လုပ်သော Kelp သည်ပြားချပ်ချပ်မဟုတ်သောစေးကပ်သော, အစာရှောင်ခြင်း, ခြောက်သွေ့သော Kelp သည်အရည်အသွေးနှင့်အရောင်စည်းကမ်းများအရခြောက်သွေ့သော kelp ထက်သာလွန်သည်။Kelp ခြောက်သွေ့လာသောအခါအဓိကပြ problems နာများစွာရှိသည်။1. ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေနှင့်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်သော Kelp ၏ပြ problems နာများ။ လက်ရှိအချိန်တွင်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ထုတ်ထုတ်လုပ်မှုအများစုသည်ရိုးရာခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောမီးနှင့်ခြောက်သွေ့သောနည်းလမ်းကိုလက်ခံသည်, အောက်ပါပြ problems နာများရှိသည်။1. အပူအပူချိန်ကအရမ်းမြင့်တယ်။ ရိုးရာခြောက်သွေ့သောနည်းပညာဖြင့်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အပူချိန်သည် 75-90 ℃ဖြစ်ပြီးခြောက်သွေ့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များခြောက်သွေ့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ခြောက်သွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်သည်ခြောက်သွေ့သောအပူချိန် 65 ℃ထက်မပိုသင့်ကြောင်းလိုအပ်သည်။2. ခြောက်သွေ့သောအချိန်သည်ကြာလွန်းသည်။ ရိုးရာနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်းသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်တန်ကိုအနည်းဆုံး 24 နာရီကြာသည်။ ထို့ကြောင့်ပင်အပူခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကြောင့်ရံဖန်ရံခါအပူနှင့်ခြောက်သွေ့မှုများကိုရံဖန်ရံခါဖြစ်ပေါ်စေသည်။3. ကြီးမားသောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု။ ရိုးရာခြောက်သွေ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အပူစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ခြင်း, 30% -60% ခန့်ရှိသည်။ ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအစိုဓာတ်ကိုခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်အစိုဓာတ်ကိုခြောက်သွေ့စေသည့်အပူသည် 36% ခန့်ရှိပြီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုသည် 58% ခန့်ရှိသည်။ ခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းများသည်အပူနှင့်ခြောက်သွေ့သောအပူကိုယူသည်။ ဆုံးရှုံးမှုသည် 2% နှင့် 2% အသီးသီးရှိပြီးအပူစွမ်းဆောင်ရည်သည် 40% သာရှိသည်။
Tsix Hot Air Banana Dehydrator အစားအစာစက်ရုံများအတွက် Apple Dryer သည် DPPG150s-G
ငှက်ပျောသီးနှင့်ပန်းသီးခြောက်စက်များသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီးဆင်းနေသည်။ ရိုးရာအစားအစာခြောက်သွေ့စက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ပူပြင်းတဲ့လေထုအစားအစာခြောက်စက်က 60-70% စွမ်းအင်ကိုသက်သာစေနိုင်တယ်။ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံး 1500kg Noodle ခြောက်သွေ့သောအပူစက်ရုံအပူခန်းခြောက်စက် DPHG0500050 G form ြိကွန်ပြူတာ
Noodle Dryer သည်ဆန်ခေါက်ဆွဲ, ဂျုံခေါက်ဆွဲနှင့်အာလူးခေါက်ဆွဲနှင့်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း,ယေဘုယျအားဖြင့်ခေါက်ဆွဲခြောက်သွေ့စက်သည် 6-10 နာရီမှခြောက်သွေ့ပြီးပြီးဆုံးနိုင်သည်။ ခေါက်ဆွဲစက်ရုံများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုကိုအကြီးအကျယ်တိုးတက်စေသည်။မသင့်လျော်သောစိတ်မချရခြောက်သွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်မ။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းခြောက်ခြင်း။ သင့်အတွက်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အထူးနိမ့်သောအပူချိန်, အပူစုပ်စက်ကိုအခြေခံသည့်နည်းပညာကိုအခြေခံသည့်နည်းပညာ။ ခြောက်သွေ့သောခေါက်ဆွဲသည်၎င်း၏အာဟာရတန်ဖိုးမဆိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါTwesix အကောင်းဆုံး 1500kg Noodle ခြောက်သွေ့စက်အပူပိုင်းစက်စက်စက်စက်ရုပ် DPHG050s-G formationprice-twesix, Copeland Compressor နှင့် Schnelider Electronics Compesix